လှည်းတန်းမှာ ထိုင်းစာစားချင်သူတွေအတွက် ‘Yum Thai’ Thai Food
လှည်းတန်းစင်တာမှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Movie Date လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီး သွားခဲ့တာပဲ။ လက်မှတ်မရလို့ အစားဘက်...
3112 Views 1 year ago
ငယ်ငယ်ကစားခဲ့တဲ့ အသားတု၊ ပဲပြား၊ ပဲသွေးတုတ်ထိုးတွေ သွားစားကြမယ်
အက်မင်တို့ငယ်ငယ်က လမ်းထဲမှာအန်တီကြီးတွေရောင်းတဲ့ တုတ်ထိုးလေးတွေ တစ်ချောင်း(၂၀)တို့ (၅၀)တို့။ အဲ့ဒါကိုမုန့်ဖိုးလေးတွေစုပြီး သွား...
2130 Views 1 year ago
သူငယ်ချင်းတို့ Pearl Condo ဘက်မှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ချင်ရင် ‘Outer Room’ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်။
ဒီဆိုင်လေးကတော့ Pearl Condo အပြင်ဘက်ခြမ်းလေးမှာရှိပါတယ်။ ဆိုင်က အေးအေးဆေးဆေးရှိပြီး Mexican အစားအစာတွေအဓိကရပါတယ်။ Restaurant လည...
အလုပ်ကိစ္စနဲ့လေဆိပ်ဘက်ရောက်ဖြစ်တော့ ဧည့်သည်တွေပါခေါ်ပြီး စံတော်ဝင်မှာတစ်ခုခုစားဖို့ ချီတက်သွားကြတာပဲ။ ဟိုမှာကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဒင...
သုံးပွဲတစ်သောင်းနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ တာမွေက Seafood ဆိုင်လေး
အခုတလော သုံးပွဲတစ်သောင်းဆိုပြီး လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Asia Seafood ဆိုတဲ့ဆိုင်ကို ဘော်ဒါတွေ သတိထားမိကြလားတော့မသိဖူး။ ကိုယ်...
3094 Views 1 year ago
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Date တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူစုံတွဲတွေ ချိန်းကြမယ်ဆိုရင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုထပ်တွေ့ထားပ...
မြေနီကုန်းဘက်ရောက်နေလို့ ဘာစားရမလဲဆိုသူတွေအတွက် နောက်ထပ်တစ်နေရာတိုးပြီ။ ပေါက်ကံညဈေးတန်းက အင်းလေးအမှတ်တရဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ဒီဆိ...
2172 Views 1 year ago
ပေါက်ကံ သို့ အလည်တခေါက် (ဒါမှမဟုတ်) ပေါက်ကံ Tour
ပြည်သူ့ရင်ပြင်အပေါက်ဝနားက ပေါက်ကံညဈေးတန်း ကိုဘယ်သူတွေသွားပြီးပြီလဲ ? မေးလဲမေးချင်တယ်။ မေးလဲမေးလိုက်ပြီ
စမ်းချောင်း၊ ရှမ်းလမ်းမီးပွိုင့်အနီး၊ မကြာသေးမီကမှဖွင့်ထားတဲ့ ဗားကရာလမ်းမပေါ်က ဟောင်ကောင်စတိုင်လ် အရသာနဲ့ရွှေနန်းတော်ဟော့ပေါ့ဆိ...
529 Views 1 year ago
နိုင်ငံတော်တော်များများမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Sushi Tei ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေပြီနော် !
Singapore ကနေ Franchise ပြန်ယူထားတဲ့ Sushi Tei ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဆိုင်ခွဲအနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဓမ္မစေတီ...